Opinion – Nepal Reports
– आरती कँडेल दैनिक जिबनमा जति पनि तिता-मिठा पलहरु व्यतित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छन्, ति मिठा पल त शाहरुख खानकै शैलीमा स्वागत गरी व्यतित गर्ने बानी छ तर तिता क्षणहरुसंग जोडको तोड भएर लड्ने बानी अझै बसिसकेको छैन। केहि हदसम्म त लड्छु तर कतिपय पलहरु यस्ता हुन्छन् जसमा केवल मुन्टो फर्काएर हिंड्नु बेस लाग्छ। त्यस्ता […]
प्रिया कार्की पोखरा नगरपालिका घोषणा हुँदा बजार निकै सानो थियो । सञ्चार क्षेत्रको पहुँच पनि न्यून थियो । २०१६ सालतिर सञ्चार क्षेत्रमा केहीले जोखिम मोलेरै काम गरे । त्यसको मतलव जोखिम अहिले छैन भन्ने होइन तर अहिलेको जस्तो सहज त्यो बेला थिएन । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको परिवर्तनले देशमा पत्रकारिताभन्दा बढी राजनीति क्षेत्रमा विभिन्न समयमा भएको परिवर्तनले […]
अलिकति गाउँ सदरमुकाम पसेको छ, अलिकति गाउँ पोखरा चितवन र काठमान्डौ। म सोचिरहेछु, गाउँ कहिले गाउँ फर्किएला र फर्कीउँला म ?
विचार गरौं, युद्धमा मारिएकाहरूमध्ये कतिपय प्रचण्ड र बाबुरामभन्दा सामर्थ्यवान् नेता हुनसक्थे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाभन्दा महान् कवि हुनेवाला पो हुने थिए कि? 'जनयुद्ध' सफल पार्ने हतारमा जनसाधारणको 'सफाया' गर्दा कति जना भविष्यका बुद्ध र बीपी कोइराला मारिए होलान्? त्यसैले हत्याको औचित्य नन्दप्रसादलेमात्र खोज्ने छैनन्। उनले त न्यायमै चित्त बुझाउने थिए। बास्तवमा समाजले भविष्य गुमाएको छ। त्यसैले एक दिन प्रत्येक मृत्युको औचित्य खोजिनेछ।
जुन रुपमा धर्मका नाममा सामाजिक हस्तक्षप हुने गरेका खबरहरु बाहिर आउने क्रम बढ्दो छ, त्यहि अनुपातमा धर्मको बियों समाती त्रासदीको राजनीति गर्ने झुण्डहरु सक्रिय हुने डर पनि बढेको छ। कहालीलाग्दो कुरा के हो भने धर्मका नाममा हुने साम्प्रदायिक हिंशाहरु जति सजिलै मौलाउँछन् , त्यति नै मुस्किल ले नियन्त्रणमा आउने गर्दछन्। तसर्थ धार्मिक अतिवादीहरु मौलाउन सक्ने वातारणको सिर्जना हुन नदिन यसवारे सम्वन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। -विज्ञान कँडेल